Margarekha आज बुधबारको राशिफल – Margarekha
आज तपाईं गल्नुहुनेछ र साना कुराहरूले दुखी हुने धेरै सम्भावना छ। तपाईंमा छिट्टो पैसा कमाउने इच्छा हुनेछ। आफ्नी पत्नीको उपलब्धि प्रशंसा गर्नुहोस् र उनको सफलता र सौभाग्यमा आनन्दित हुनुहोस्। आफ्नो कृतज्ञतामा उदार र निष्कपट हुनुहोस्। तपाईंको लागि प्रेम हावामा छ। मात्रै वरिपरि हेर्नुहोस्, सबै कुरा गुलाबी छ। तपाईंको सहयोगी मनोवृत्ति र विश्लेषणात्मक कौशललाई याद गरिनेछ। आफ्नो कार्य र बोलीमा ध्यान दिनुहोस् किनकि तपाईंले केही नराम्रो गर्नुभयो भने अख्तियार व्यक्तित्वले थोरै मात्रै जान्नेछ। आफ्नो जोडीको निर्दोष कार्यले आज तपाईंको दिन शानदार बनाउनेछ!
स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्याहरूले असुविधा गराउन सक्छन्। शंकास्पद वित्तीय सम्झौतामा बाँधिनुबाट सावधान रहनुहोस्। अरूलाई प्रभावित गर्ने तपाईंको क्षमताले फाइदा पुर्याउनेछ। तपाईंलाई आफ्नो भावना व्यक्त गर्न गाह्रो पर्न सक्छ। काममा आजको दिनलाई उत्कृष्ट बनाउन तपाईंको आन्तरिक शक्तिले पनि उत्तिकै सहयोग दिनेछ। तपाईंलाई बहकाउन वा केही हानि हुन सक्ने जानकारी दिने प्रयास गर्ने व्यक्तिहरूबाट जोगिनुहोस्। आज आफ्नो जोडी तपाईंसँग निराश छ र तपाईंलाई थाहा हुनेछ जस्तो देखिन्छ।
मानसिक रोगमा परिणत हुनु अघि तपाईंले आफ्नो नकारात्मक विचार नष्ट गर्नुपर्छ। तपाईंले केही दान र सदावर्त कार्यमा आफैलाई संलग्न गरेर तिनीहरूबाट छुटकारा पाउन सक्नु हुनेछ जसले गर्दा पूर्ण मानसिक सन्तुष्टि दिनेछ। बचाएको पैसा अचल सम्पत्तिमा निवेश गर्नुपर्छ। आफ्नो हँसिलो प्रकृतिले सामाजिक जमघटमा तपाईंलाई लोकप्रिय बनाउनेछ। एकोहोरो सम्बन्धको लागि आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोस्। तपाईंले आज सामाजिक मिडियाको प्रयोग गर्न छोड्नु भएन भने, काममा ठूलो गल्ती गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंलाई आफ्नो जीवनमा रोचक कुरा होस भनेर लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ भने – तपाईंले केही राहत पाउने पक्का छ। आफ्नो जोडीसँगको तपाईंको भावनात्मक बन्धनमा आज नराम्रो हुन सक्छ
अरूको आवश्यकता तपाईंको इच्छासँग तपाईंलाई हेरचाह गर्न हस्तक्षेप गर्नेछ – आफ्ना भावनाहरू नरोक्नुहोस् र आराम गर्नको लागि तपाईंले चाहेका कुराहरू गर्नुहोस्। आफ्ना मित्रको मद्दतले वित्तीय समस्याहरुको समाधान गरिनेछ। तपाईंले धेरै नभेट्ने मान्छेसँग कुराकानी गर्न राम्रो दिन। आफ्नो प्रियको। काम गर्ने आफ्नो वरिष्ठ आज स्वर्गदूतहरूको अभिनय गरेको जस्तो देखिन्छ। महत्त्वपूर्ण मान्छेसँग बातचीत गर्दा तपाईंको शब्दहरू होशियारीसँग चुन्नुहोस्। केही विशेष आश्चर्य गरेर तपाईंको जीवनसाथीले तपाईंलाई नराम्रो मुडबाट छुटकारा दिलाउनेछ।
सिंह राशिफल (Wednesday, April 11, 2018)
मानसिक शत्रुहरूले शरीरको प्रतिरोधक शक्ति कम गर्दछन् भन्ने कुरा महसुस गर्ने यो राम्रो समय हो, त्यसैले मनमा कुनै पनि नचाहिने विचार पस्न नदिनुहोस्। अचल सम्पत्तिमा लगानी गरे राम्रो हुनेछ। अरूलाई अपमान नगर्ने प्रयास गर्नुहोस् र आफ्नो परिवारको आवश्यकता अनुसारको बन्नुहोस्। रोमान्टिक सम्बन्धमा आज कमी हुन सक्छ। तपाईंले आज आफ्नो दृष्टिकोणमा र कार्यालयको कामको गुणस्तरमा सुधारको अनुभव गर्नु हुनेछ। असीम रचनात्मकता र उत्साहले तपाईंको अर्को फाइदाजनक दिन आउँछ। तपाईं कसैसित बस्नु भयो भने झगडा हुन्छ नै। तपाईंको आफ्नो जोडीसित तर्क हुन सक्छ।
आज तपाईंले धेरै खिचलो र फरक विचारहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ जसले तपाईंले रिस उठ्ने र अप्ठ्यारो गर्नेछ। तपाईंले उचित सल्लाह बिना लगानी गर्नुभयो भने घाटा हुने सम्भावना छ। घरेलु जीवन शान्तिपूर्ण र प्यारो हुनेछ। आफ्नो रोमान्टिक दृश्य प्रसारित हुन नदिनुहोस्। आज काममा तपाईंलाई आफ्नो तागत र कमजोरीको थाहा लाग्नेछ। दिन साँच्चै गाह्रो छ। आफ्नो योजनामा अन्तिम मिनेटसम्म पनि परिवर्तनहरू हुन सक्छ दिन। तपाईं र आफ्नो साथीबीच आज फरक सोच हुनाले तर्क हुन सक्छ।
रमाइलो गर्न बाहिर जानेहरूको लागि सरासर खुशी र आनन्द मिल्नेछ। लामो अवधिको दृष्टिले लगानी गरिनु आवश्यक छ। टाढाका आफन्तले आज तपाईंसँग सम्पर्क गर्नेछन्। तपाईं प्रेम प्रस्ताव राखेर धेरै खुशी हुनुहुनेछ किनकि यसले तपाईंको भारी हलुँगो पार्नेछ। आफ्नो क्यारियरको आशा बढाउनको लागि आफ्नो व्यावसायिक शक्तिको प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईंले आफ्नो गतिविधिको क्षेत्रमा असीमित सफलता पाउने सम्भावना छ। धेरै फाइला पाउन आफ्नो सबै कौशल लगाउनुहोस्। तपाईं परिस्थितिबाट भाग्नु भयो भने – त्यसले तपाईंलाई साह्रै नराम्रो तरिकाले पछ्याई रहनेछ। व्यक्तिगत दूरी वैवाहिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर आज तपाईंहरू एक-अर्कामा नजिक हुने प्रयास गर्नुहोस्। रोमान्स चरममा छ
कुनै रोचक कुरा पढेर केही मानसिक व्यायाम गर्नुहोस्। तपाईंले वित्तीय लाभ हुने शानदार नयाँ विचार गर्नु हुनेछ। तपाईंले चाहनुभएको सबै ध्यान प्राप्त गर्नुहुने आज राम्रो दिन छ – तपाईंले धेरै कुराहरू लहरै पाउनुहुनेछ र तपाईंलाई के चाहिं लिनु हो भन्ने निर्णय लिन समस्या पर्नेछ। तपाईंको प्रियले प्रतिबद्धता खोज्नेछन्। तपाईंले निराशा भोग्नुहुनेछ – किनकि तपाईंले अपेक्षा गरेका पहिचान र पुरस्कार विलम्वित हुनेछन्। आज गरेको निर्माण कार्य तपाईंको इच्छा अनुसार पूरा हुनेछ। कुनै मामलालाई लिएर तपाईंले आफ्नो जोडीलाई नराम्रो गर्नाले झगडा हुन सक्छ।
धनु राशिफल (Wednesday,
प्रकृतिले तपाईंलाई उल्लेखनीय विश्वास र बुद्धि प्रदान गरेको छ – त्यसैले यसको उत्तम प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसै बसिरहनु भन्दा पैसा कमिने केहीमा किन संलग्न हुनुहुँदैन – यसले तपाईंको कमाउने शक्तिमा सुधार हुनेछ। परिवार र साथीहरूसँग रमाइलो समय बित्नेछ। रोमान्स सुखद र अत्यधिक रोमाञ्चक हुनेछ। आज गरेका संयुक्त उद्यमहरू अन्ततः लाभदायी हुनेछन्, तर तपाईंलाई साझेदारको केही विरोधको सामना गर्नु पर्नेछ। केही मनोरञ्जनका लागि राम्रो दिन। यो दिन तपाईंको नियमित वैवाहिक जीवनमा विशेष दिन हो; तपाईंले आज साँच्चै असामान्य केही अनुभव गर्नु हुनेछ।
भीड बसमा यात्रा गर्दा रक्तचापका विरामीहरुले उनीहरूको स्वास्थ्य बारे अतिरिक्त ध्यान दिनुपर्छ। धेरै स्रोतबाट मौद्रिक लाभ हुनेछ। पुराना आफन्तहरूले अव्यावहारिक मागहरू गर्ने सम्भावना छ। कार्डमा रोमान्टिक खुशीमा परिवर्तन छ। आज तपाईंलाई काममा आफ्नो सहकर्मीबाट केही कम सम्मान गरिएको महसुस हुन सक्छ। असीम रचनात्मकता र उत्साहले तपाईंको अर्को फाइदाजनक दिन आउँछ। आफ्नो जोडीसित जतिसुकै धेरै लडाई गरेपनि; तपाईंहरू दुवै एक-अर्कालाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने नबिर्सिनुहोस्।
एउटा लाभदायी दिन हो र तपाईं दीर्घ रोगबाट राहत पाउन सक्षम हुन सक्नुहुनेछ। आमाबाबुको सहायताले गर्दा वित्तीय बाधाहरु टर्दै गएको जस्तो देखिन्छ। घरमा छोराछोरीले अनुपात बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न गरेर तपाईंलाई समस्यामा पार्नेछन् – कुनै पनि कदम चाल्नु अघि तथ्य प्रमाणित गर्नुहोस्। प्रेम परमेश्वरको उपासना गरेजस्तै हो; यो धेरै धार्मिक हो साथै आध्यात्मिक पनि हो। तपाईंलाई यो आज थाहा हुनेछ। तपाईंले काममा तनाउ लिनु भयो भने, यसले अरूलाई नभएर तपाईंलाई हानि गर्नेछ। होसियारीसँग हिंड्नु पर्ने दिन – आज तपाईंको हृदयभन्दा मनको बढी आवश्यकता पर्नेछ। तपाईंको वैवाहिक जीवनलाई लिएर कुराहरू आश्चर्यजनक तरीकाले तपाईंको पक्षमा आउन सक्छन्।
मीन राशिफल (Wednesday, April 11, 2018)
तपाईंको स्पष्ट र निडर हेराइले तपाईंका मित्रलाई व्यर्थ चोट लाग्न सक्छ। अचल सम्पत्ति र वित्तीय कारोबारका लागि राम्रो दिन हो। तपाईंको अवस्था र आवश्यकता बुझ्ने घनिष्ठ मित्रसँग बाहिर जानुहोस्। रोमान्सले तपाईंको हृदय ढाक्नेछ। तपाईं एउटा कठिन जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम भएकोमा मित्र तथा आफन्तहरूले ठूलो प्रशंसा गर्नेछन्। आज तनाउले भरिएको दिन हुनेछ, नजिकका कर्मचारीहरूसँग धेरै मतभेद आई पर्न सक्छ। आजको दिन “पागल हुने” दिन हो! तपाईं आफ्नो जोडीसित प्रेम र रोमान्सको टुप्पामा पुग्नु हुनेछ।
२८ चैत्र २०७४, बुधबार ०६:१४ प्रकाशित